Ndụmọdụ ndị bara uru iji gaa ọnụ ala | Akụkọ Njem
Susana Garcia | | Atụmatụ, General, njem
O nwere ike ịbụ na otu n'ime mkpebi ọhụrụ nke afọ bụ ịga njem karịa, ma hụ ọtụtụ ebe aga, mana ọ bụghị anyị niile nwere akpa ejikere maka mmefu nke ụfọdụ njem. Otú ọ dị, ndị na-aghaghị ikesi belt ha ruo mgbe ebighị ebi mara Jehova ụzọ ka mma iji chekwaa, dịkwa ka njem metụtara. Ya mere anyị ga-enye gị ndụmọdụ ole na ole bara uru iji gaa ọnụ ala karịa afọ a.
O nwere ike ịbụ na ị maraworị ọtụtụ n'ime ihe ndị a, ma ọ bụ anyị nwere ike ime ka ị chee na ikekwe ị naghị echekwa nnukwu ego mgbe ị na-eme njem. Kedu ụzọ ọ bụla, anyị nwere olileanya inyere gị aka nweta azụmahịa na njem inwe ike ịhụ ọtụtụ ebe n'ụwa.
1 Mgbanwe aga
2 Jiri Ngwa
3 Oge kacha mma iji zụta tiketi
4 Zere elu oge
5 Chekwaa ebe obibi
6 Zọpụta na njem
7 Kedu ihe ị ga-ahụ, chọpụta
Otu n'ime ihe ndị kachasị mkpa iji nweta njem dị mma bụ enweghị ebe ọ ga-anọ. Kwa afọ ọnụahịa na-agbanwe, na enwere ebe a na-achọsi ike, nke anaghị adị ọnụ ala n'ihi ọchịchọ. Ma e nwere ndị ọzọ nwere ike ịmasị nke ukwuu, nke ahụ dịkwa ọpụrụiche. Ebe dịka Thailand, Tunisia ma ọ bụ Poland ha nwere ike ịbụ ezigbo ebe akụ na ụba maka afọ a. Mana enwere ọtụtụ ndị ọzọ. Ọ bụrụ n’ịchọ n’enweghị ebe edoziri, ị ga-ahụ ezigbo ọnụ ahịa n’ebe ndị juru gị anya. Ezigbo onye njem na-achọ ịchọta akụkụ ụwa niile.
Taa enwere ngwa maka ihe niile, ọbụlagodi iji nweta njem kachasị mma na ọnụahịa kacha mma. Ọ dịghị mkpa ịga ụlọ ọrụ, ebe ha ga-enye anyị nchịkọta njem, mana na ọnụahịa dị elu. Iji ngwa Kayak anyị nwere ike ịtụle ọnụahịa tiketi ma nweta ndị dị ọnụ ala. Site na ntinye akwụkwọ anyị ga-ahụ ebe obibi ebe ọ bụla anyị gara. Iji nweta tiketi dị ọnụ ala, anyị agaghị akwụsị nbudata ngwa ndị dị ka Hooper, nke na-achọ ụgbọ elu dị ala, mana ọ bụghị naanị nke ahụ, kamakwa ihe bụ oge kachasị mma iji zụta tiketi, n'ụzọ e mere atụmatụ. Na Onye na -achọ ihe Anyị nwere ngwa nke anyị ga-achọ ebe kachasị dị ọnụ ala, ọ bụ ezie na anyị ga-enwe ike ife efe n'oge ọ bụla, ma ọ bụ chọọ ebe ndị na-agbanwe agbanwe mgbe anyị nwere ezumike oge niile iji nweta azụmahịa kacha mma.
Oge kacha mma iji zụta tiketi
E nwere ọtụtụ ihe na-kwuru banyere ezigbo oge ịzụta tiketi. Site na izu asaa tupu ụbọchị iri abụọ na otu. Ihe doro anya bụ na anyị ekwesịghị ichere ruo oge ikpeazụ, mgbe ọnụahịa na-abawanye karịa. Enwere aghụghọ nke anyị nwere ike iji mgbe anyị na-ede akwụkwọ. Ma ọ bụ na ọtụtụ oge anyị na-ahụ tiketi na ọnụahịa, ma ọ bụrụ na anyị chọrọ iwere nke ọzọ, ọ rịgoro elu. Ọfọn, ndị ọkachamara na-atụ aro ihichapụ kuki ịdebe peeji ahụ ka ọnụahịa ahụ ghara ịrị elu.
Zere elu oge
Ma eleghị anya, ọ bụghị mmadụ niile nwere ike izere nke a, ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ndị mmadụ nwere ezumike n'otu oge, n'oge ọkọchị, na ngwụsị izu na n'oge Krismas. Mana ọ bụrụ na ị bụ otu n’ime ndị nwere ihu ọma ole ma ole nwere ike ịhazi ha, chọọ ọnwa ndị ọzọ mgbe ọ ga-adị ọnụ ala karịa njem. Febụwarị na MachịDịka ọmụmaatụ, ha dị mma ịchọta ezigbo azụmaahịa, ma ọ bụ Septemba na Ọktọba. Ndị a bụ ọnwa ole na ole ndị mmadụ na-eme njem na mgbe anyị na-ahụ ọtụtụ onyinye, na tiketi na ebe obibi, na enwere ọtụtụ ebe enwere ike ịga leta n'afọ niile na enweghị nsogbu.
Chekwaa ebe obibi
Enwere ọtụtụ echiche maka ịchekwa ebe obibi. Ọtụtụ afọ gara aga anyị tụlere ịga ụlọ nkwari akụ, n'ụdị ọdịnala, mana taa enwere ọtụtụ ohere ndị ọzọ. Anyị nwere ike ịchọ niile di iche iche nke hotels na ntinye akwụkwọ, na-enye, ma anyị nwekwara ike ịnọ na ama ama, nke dị ọnụ ala ma zuru oke. Gbalia ihu na elele anya nke ndi oru na foto ndi ha deputara, nihi na ha nwere ike idi iche na ihe ha na ere anyi, yabụ anyi ghota ihe anyi ga acho. I nwekwara ike ịchọ ebe obibi, ma ọ bụ mee swaps ụlọ.
Zọpụta na njem
N'ime obodo ukwu, anyị ga-ahụkarị ụzọ iji mee ka ụgbọ njem dị ọnụ ala. Nnukwu ihe atụ nke a bụ kaadị njem Dịka ọmụmaatụ, London Oyster. A na-ewepụ ọtụtụ n’ime kaadị ndị a ọtụtụ ụbọchị, ka anyị wee chekwaa ọtụtụ ihe gbasara ịga site n’otu ebe ruo ebe ọzọ. Anyị ga-agwa onwe anyị tupu anyị agawa ịkwụsị itinye ego maka ihe ndị dị ka njem na nri. A pụkwara ịchịkwa mmefu ndị a ma ọ bụrụ na anyị nwere atụmatụ niile.
Kedu ihe ị ga-ahụ, chọpụta
N'ọtụtụ oge anyị na-akwụ ụgwọ lee ihe mgbe enwere ụbọchị n'ime ndị nweere onwe ha, dị ka na ebe ngosi ihe mgbe ochie. Anyị ga-agwa onwe anyị maka ihe ndị ahụ na-atọ ụtọ ịme na obodo nwere ike ịbụ n'efu, ịnụ ụtọ nnukwu ego na-enweghị nnukwu ego. Ma ọ bụrụ na anyị ga-akwụ ụgwọ, anyị nwere ike ịchọọ onyinye na mbelata oge niile n'ịntanetị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » General » Atụmatụ bara uru iji gaa ọnụ ala
5 Ebe maka a iche iche Christmas